CC Warsame: “Farmaajo nin isdaba qabanaya maaha” | KEYDMEDIA ONLINE
CC Warsame: “Farmaajo nin isdaba qabanaya maaha”
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sheegay in Farmaajo uusan ahayn nin is daba-qabanaya isla markaana uusan jirin Ra’iisul Wasaare dheeli tiraya oo koontaroolaya damaciisa guracan.
MUQDISHO, Soomaaliya - CC Warsame ayaa sheegay in Seddax qodob xal looga gaari jiray murannada doorashooyinka dalka, kuwaas oo fududeyn jiray in waddanku helo nidaam qasab ama qanacsanaan ku yimid oo is baddal ku dhaco.
Warsame ayaa Saddexda qodo ku sheegay in ay kala yihiin;
1- “Tan koowaad, waa Raysalwasaare musharrax ah oo dheellitira awoodda madaxweynaha, isla markaana xakameeya damaca doorasho ee madaxweynaha, taa lama hayo”.
2 – “Tan labaad waa kalsooni uu isku qabo madaxweynaha xilka haya in uu doorashada ku guulaysanayo”.
3- “Tan saddexaad waa faragelinta toos ah oo dibedda ka timaadd”.
Hoggaamiyaha Wadajir oo miijinayay qaabka aan rajo looga qabin in Farmaajo ogolaado in dalkan ay ka dhacdo doorasho la isla ogol yahay ayaa sheegay in laga dhur-sugo arrinta Saddexaad oo ah fara-galinta shisheeye, waase haddii aysan ku dhiirsho iyo go’aanno ku dhac leh aysan qaadan Madaxda Maamul goboleedyada taabacsan farmaajo.
“Qayladii way ka dhammaatay safiirrada beesha caalamka ee Soomaaliya ku sugnaa, waxaa maalamahan billawday in farriimo kulul ay caasimadaha ka yimaadaan. Soomaalidu ha is xalliso ayuu arrinku ku sinnaa. Soomaalina haddii aan labada qodob oo kale midkood la helin isma xallin karto. Haddaba waxaa lagu qasban yahay in kan seddaxaad laga dhursugo, ama mid kale oo xal Soomaaliyeed ah uu ka soo hormaro oo ah in Dowlad Goboleedyadu go’aan mideysan gaaraan oo ay xal keenaan”. Ayuu yiri CC Warsame.
“Farmaajo nin isdaba qabanaya maaha, Raysalwasaare kaalintiisa qaadanaya sooma muuqdo, Dowlad Goboleedyada Farmaajo la jira oo isaga gacanta qabta, qarankana u hiilaya waxay u baahan tahay in ku dhac iyo dhiirrasho midkood, labo ama 3 dooduba yeeshaan, haddii kale waxa la sugaa waa fara gelin shisheeye oo toos ah sidii dhiici jirtayba. Waa tii C/laahi Yuusuf AHUN isku casilay ama C/qaasim Mbgathi lagu geeyey”. Ayuu kusoo gabagabeeyay hadalkiisa.